दुर्घटना भन्ने कुरा भवितव्य हो तर केहि अकर्मण्य व्यक्ति र प्रवृत्तिका मूर्खतापूर्ण कदम, लोभ लालच र भ्रस्ट क्रियाकलापबाट सृजित कदमले सर्वसाधारणको ज्यान जानु हत्या हो । यातायात व्यापारको नाममा थपिएको पासोमा परेर बर्षेनि करीब २ हजार व्यक्तिको ज्यान जानु के सामान्य कुरा हो ?
भौगोलिकरुपमा कठिन रहेका क्षेत्रहरुमा सडक यातायात अत्यन्त जोखिम यात्रामा नै पर्ने गर्दछ । अग्ला पहाड र पहाडका बीच खोपर निकालिएका बाटोहरुमा पहिरो र दुर्घटनाको जोखिम रहन्छ नै तर यी कठिनाइमा सुरक्षित यात्रा गर्न गराउन, जनधनको क्षतिको हदैसम्म कम गर्ने के उपाय अपनाएका छौं हामीले ?
झट्ट हेर्दा हाम्रा सवारी साधनहरुमा लेखिएका श्री पशुपतिनाथले रक्षा गरुन् भन्ने प्रार्थनाबाट नै चलेका छन् हाम्रा यातायात व्यवस्था ।